Iindaba - Siyavuyisana neYunivesithi yaseZhejiang yeTekhnoloji kunye neBhunga lezeNzululwazi kunye neTekhnoloji yeSixeko ngokutshintshiselana
Siyavuyisana neYunivesithi yaseZhejiang yeTekhnoloji kunye neBhunga lezeNzululwazi kunye neTekhnoloji yeSixeko ngokutshintshiselana
Ngomhla ka-Agasti 20, iZhejiang University of Technology Textile Research Institute kunye neHangzhou Science and Technology Bureau beza kwinkampani yethu (Ruiqi (Hangzhou) filter Technology Co., Ltd.
Emva kokudlala ividiyo yethu yokwazisa, uSihlalo uZeng Jiangmei wazisa iimveliso zethu eziphambili. Ruiqi (Hangzhou) filter Technology Co., Ltd. yinkampani ngokukodwa ekwenzeni amalaphu non-ephothiweyo kunye nezixhobo zokhuselo lokusingqongileyo. Ngokukodwa kwiminyaka yakutshanje, ukukhula kwefayibha ekhethekileyo kwivenkile emva kwendumiso yentengiso.
Ngokwesiseko sotshintshiselwano olunzulu lweteknoloji yempahla eyolukiweyo phakathi kwala maqela mathathu, iYunivesithi yeThekhinoloji ithi ukungaqhubeki kokulungiswa kwento leyo bebeyenza ngalo lonke ixesha. Ngale ndlela, banethemba lokufumana ishishini elomeleleyo lokusebenzisana, hayi kuphela ukuba inkonzo yenziwe kakuhle, inkonzo kufuneka ijolise kwaye ijolise.
Kwangelo xesha, sidinga ubukrelekrele obomeleleyo kunye nenkxaso yezobuchwephesha, kwaye sinempendulo elungileyo kuGqirha Su weYunivesithi yeTekhnoloji yengcebiso kwiingxaki zobuchwephesha ezihlangabezene nenkampani. Emva kwexesha, uSihlalo uZeng wathi sinethemba lokufumana elona xabiso liphantsi kunye nomgangatho ophezulu kolu shishino.
Emva koko, phantsi kobunkokheli bukaSihlalo uZeng, wonke umntu watyelela indibano yocweyo yemveliso ngomdla omkhulu. Usihlalo uZeng ukwazisile ngemeko yangoku yemveliso kunye nokuphuculwa kwezixhobo zenkampani. Iinkokheli ze-Institute of Technology zibuze ngokweenkcukacha malunga nokusebenza nokusetyenziswa kwezixhobo zethu. Itekhnoloji yethu nolawulo zinconyiwe.
Emva koko, safika kwilayibrari yethu yokubonisa imveliso, apho sinokubona khona uninzi lweemveliso zethu zelaphu. Usihlalo uZeng ubalaselise i-Kevlar waziva, i-PPS yaziva, i-acrylic yaziva, i-basalt yaziva kwaye ijute yaziva. Kukhankanyiwe ukuba inkampani yethu yeyokuqala ibasalt yaziva ifektri e China. Ukuthunyelwa kwejute kuvakala ukuba kusetyenziselwa ikakhulu ukuthintela ukukhula kokhula kwaye izinto zinobuhlobo kwindalo kwaye ziyahla.
Okokugqibela, la maqela mathathu eza nelabhoratri yethu ukuza kutyelela, emva kokungena, satsalwa ngaba matshini. Ngokukodwa, umatshini wethu wovavanyo oluchasayo, lo matshini unokuba lilaphu le-anti-prick lomgangatho waseYurophu, umgangatho wase-United States nolunye uvavanyo lokuchasa, iYunivesithi yeTekhnoloji uGqirha Zhao ubuze ngokukodwa ngomatshini, njengovavanyo iindlela, vavanya ukuba yintoni iazis ethe tyaba kunye ethe nkqo emelweyo, njalo njalo.
Inkampani yethu kunye neYunivesithi yaseZhejiang yeTekhnoloji igcine ubudlelwane obusondeleyo kunye nobuhlobo ixesha elide, olu tyelelo kunye notshintshiselwano luya kuqhubeka luqinisa intsebenziswano yobuchwephesha phakathi kwala macala mabini.